Wararka Maanta: Arbaco, Jan 10, 2018-Madaxweyne Muuse Biixi oo la kulmay Ergayga Xoghayaha Qaramadda Midoobay u qaabilsan Soomaaliya
Arbaco,January 10,2018 (HOL)- Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabiley ergayga Gaarka ah ee Xoghayaha guud ee qaramadda midoobay u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya Amb. Michael Keating iyo wefti uu hogaaminayo.
Shirkaasi markii uu dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka Arrimaha Dibadda Dr:Sacad Cali Shire iyo Amb. Michael Keating oo ah ergayga UN-ta u qaabilsan Soomaaliya.
“waxa waxa halkan inoogu yimid Michael Keating oo ah ergayga gaar ah ee xoghayaha qaramada midoobay u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya, waxa uu la kulmay madaxweynaha, waxaanay ka wada hadleen waxyaalo faro badan oo la xidhiidha shaqada iyo iskaashiga ka dhexeeya, waxaana ka mid ah siyaasada, dimuqraadiyadda, nabadda, dhaqaalaha, cumaawimadda.”ayuu yidhi Shire
Sidoo kale, waxa isaguna halkaasi hadlay ergayga gaar ah ee xoghayaha qaramadda midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating, waxaanu sheegay inay madaxweynaha ka wada hadleen arrimo dhinaca siyaasada, dhaqaalaha, shaqo abuurka dhalinyaradda iyo arrimo kale.
“madaxweynaha iyo xukuumadda waxaan ka wada hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin nabadgalyadda, dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dhalinyaraddda, waana ku hambalyeeyey shacabka Somaliland doorashaddii ay sanadkii hore galeen ee ay madaxweynaha cusub ku doorteen”ayuu yidhi ergayga xoghayaha guud ee UN-ta Keating.
Waxa kale oo wax laga waydiiyey xiisadda ka taagan goboladda Bariga ee u dhexeysa Somaliland iyo maamulka Puntland, waxaanu sheegay in aanu dagaal xal ahayn ee loo baahan yahay in laga wada hadlo waxyaalaha dhibaatadda keenaysa.
“ waa in labadda dhinac wada hadal ka galaan xiisadda taagan, xal maaha in dagaal iyo militari la adeegsadaa waana in si degdeg ah uga wada hadlaan In aanay dhibaato dhicin”ayuu yidhi Keating oo ka hadlayey xiisaaddii maalmihii dhowaa ka dhacay Tuka raq ee Somaliland iyo Puntland iskaga hor yimaadeen.
Waxa kale oo wax laga waydiiyey khilaafka ka taagan maamulka hawadda sare, waxaanu sheegay in loo baahan yahay in labadda dhinac ee hawadda isku hayaa la yimaaddaan hab ay labaduba ku guulaysan karaan oo midna aanu ku khasaarin, taasina ay imanayso in laga wada hadlo waxyaalaha la isku hayo.